ငှသေုံးသိနျးရှိတယျ ဘာရငျးနှီးရငျ ကောငျးမလဲ?(အရမျးကောငျးတဲ့ Idea လေးပါ) - MDY News
ဒီစာက သငျ့အတှကျအကွိုးရှိစတေယျဆိုရငျ Like & Share လုပျပေးကွပါလို့ …။
သိပ်ကောင်းတဲ့ idea တစ်ခုကို မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ်။ အရင်းဆုံ ကိစ္စမတင်ပြခင် ပြောပြသင့်တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခု ရှိပါတယ် …။
ဒီအဖြစ် အပျက်ကို ဒီလောက်နှင့်ပဲ အဆုံးသတ် လိုက်ပါတော့မည်။ အရင်းအနှီး တစ်ပြားမှ မသုံးပဲ။ ငွေ (၆၀၀) ဒေါ်လာ ရရှိအောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား/သူ တွေဟာ။ ဘာတွေ သင်ပေးသွားပါသလဲ။ ???
ဟုတ်ကဲ့။ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ငွေအင်အားကိုမကြည့်သင့်ပါ။ အာရုံမစိုက်သင့်ပါ။ ကိုယ့်မှာ ရှိသည့် ညဏ်ရည်ကိုသာအသုံးချ လိုက်ခြင်းဖြစ် သည်။ အကယ်၍ငွေ ၁၅ သိန်းရှိမှ။သိန်း ၃၀ ရှိမှ။ သိန်း ၁၀၀ ရှိမှ။ရင်းနှီးနိုင်မယ်။ လုပ်နိုင်မယ် လို့သာတွေးနေရင်အာရုံစိုက်နေရင် မင်းဦးနှောက်ကို မင်းပဲပြန်ပိတ်ပင်လိမ့်မယ် …။
ငွေရှာဖို့ အတွက်ကိုငွေမရှိဘူး ၊ အရင်းနှီးနည်းတယ်လို့ သာ စွတ်ပြောနေရင် ရယ်စရာ ဖြစ် လိမ့်မယ် …။
သူကကောင်မလေးပါ။ ဒုတိယနှစ်၊ အဝေးသင်ကျောင်းသူ။ ၁၀ တန်းပြီး တာနှင့် နံနက် ၄ နာရီနိုးသည်။၀က်ခေါက်၊ ကြက်ခေါက်တွေ ကြော်သည်။ ဈေးသို့ တင်ရောင်းသည် …။
နေ့ခင်းပိုင်းမှ ညနေအထိ လေယဉ်လက်မှတ်ရောင်း ကိုယ်စားလှယ် လုပ်သည်။ ဆိုင်ခန်းငယ် ကလေးဖြင့်လေယဉ် လက်မှတ်ရောင်းနေသည် …။
သိပ်မကြာမှာပဲ ဆိုင်ကို အလှဆင်ပြီး အမျိုးသမီးအိတ် ကလေးတွေ ကို အနည်းအကျင်း တင်ရောင်းသည်။ နောက်ထပ် မကြာခင်မှာပဲ သူသဘောကျသည့် အင်္ကျီတွေ သူသဘောကျသည့် လက်ဆောင် ပစ္စည်းတွေကို အနည်းအကျင်း တင်ရောင်းသည် …။
သူလုပ်ချင်တာကို တတ်နိုင်သလောက် သူလုပ် လာသည်။ အခုလဲ သူပုံနှိပ်စက်တွေ ပါ လုပ်နေသည်။ပုံနှိပ်သည့် နေရာက အိမ်မှာ၊ ပစ္စည်း/အလုပ် လက်ခံ တာက ဆိုင်မှာ ဖြစ်သည် ..။
သူမ လုပ်ချင်တာကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု။ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်။ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့ သူမလည်းသူ့ အိုင်ဒီယာကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူလည်း‌ ငွေကို ဦးစားမပေးသင့်။ ငွေကို အာရုံ မစိုက်သင့် …။
ငွေကို အာရုံစိုက်နေရင်။ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင် ချက်တွေ။ စိတ်းကူးကောင်းတွေ။ အိုင်ဒီယာကောင်းတွေ ကို ပါ ဖျက်စီးပြစ် လိမ့်မယ် …။
ကိုယ် ဘာ ကျွမ်းကျင်တာ ကိုယ် ဘာတွေ့ထား တယ်။ကိုယ် ဘာလုပ် သင့်တယ်။ ဘယ်အခွင့်အရေး ကို ယူသင့် တယ်။ စသည့် အချက်တွေကို သိ ပါစေ။ မသိသေးလဲ အဖြေရှာ။ ကိုယ့်မှာ အိုင်ဒီယာကောင်းတွေရှိရင်။ လက်တွေ့ လုပ် လိုက်ပါ …။
တတ်နိုင်သလောက် စလုပ်ပါ။လုပ်ပြီး မအောင်မြင်သေးပေမဲ့ အားမငယ် ပါနဲ့။ ပြသာနာတွေကို သိရှိလာမယ်။ ဖြေရှင်း တတ်လာ မယ်။ အစပိုင်း ၀င်ငွေနည်းနေပေမဲ့ ၀င်ငွေ များလာအောင် လုပ်နိုင် မည့် နည်းလမ်းတွေကို အဖြေရှာ တတ်လာ မယ်။ ရည်မှန်းချက်ကို အလှမ်းမဝေး ပါစေနဲ့ …။
ဥပမာ(၁)လမှာ ၀င်ငွေ (၃)သိန်း ရှိတယ်။ ရည်မှန်းချက်က နောက်လမှာ ၀င်ငွေ(၁၅)သိန်းတိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့။ ဦးနှောက်က မဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေပဲ တွေး လိမ့်မယ် …။
၀င်ငွေ (၃)သိန်းရှိရင် နောက် လမှာ(၅)သိန်းဝင်နိုင်အောင် ရည်မှန်း ထားပါ။ အာ့မှ ဦးနှောက်လဲ အလှမ်းမဝေးတဲ့ ရည်မှန်းချက် ကိုဖြစ်မြှောက်အောင် အဖြေရှာပေး လိမ့်မယ် …။
အိုင်ဒီယာရှိပြီး လက်တွေ့မလုပ်သေးပဲ။ အစဉ်စီချ လိုက်။ ဟိုဟာ စောင့်လိုက်၊ဒီဟာ စောင့်လိုက် ဆိုရင်တော့ဘ၀က ဘာမှ ဖြစ်မြှောက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငွေထက် တန်ဖိုးကြီးတာ မင်း ခေါင်းပါ။ လက်တွ့လုပ်ဖို့လဲ လိုတယ် …။
ဒီစာက သင့်အတွက်အကြိုးရှိစေတယ်ဆိုရင် Like & Share လုပ်ပေးကြပါလို့ …။
မိဘ ခွရောတောငျးလို သူမြား အတှကျ မိဘ ခွရော ခံ ယူနညျး